Xasan sheikh oo ka hadlay in dagaal Musharixiintu isku diyaariyeen, Marka Farmaajo Xilku ka dhamaado’ (Dhegayso) | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Xasan sheikh oo ka hadlay in dagaal Musharixiintu isku diyaariyeen, Marka Farmaajo Xilku ka dhamaado’ (Dhegayso)
Jan 11, 2021 - 30 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo kalena kamid ah midowga musharixiinta mucaaridka ayaa markii u horeysay beeniyay inay mucaaadka ay qorsheynayaan inay ka hortagaan inay dhacdo doorasho kahor 8-da Febraayo, si waqtiga uu uga dhaco Farmaajo.
HALKAN KA DHEGAYSO XASAN SHEIKH
Waar ninkan iyo kooxda kale iyo Farmaajo midna warkooda lama qaban karo. Waa wada gabbal daye muunad dadnimo oo danta Soomaaliya lahayn
Wada oggol, heshiish, doob, dagaal, iwm waa hadalka siyaasiga baaliyoobay ee Soomaalida oo aanan wax macno u samaynanyn dadka Soomaaliyeed
Laba erey wadar oggol ama wada oggl lagu yahay ma waxay beddeshay looma dhamma. Goormaa ayay Somalia wada oggol weligeed noqotay.
Boobna waa erey bixin cusub oo macna wayn ka tarjumayn.
Erey bixintan cusub waxaa ka daran Mr dhukurre ama aamusane Farmaajo oo u eg dhaqan kiisa lax dhukkan abaar moog.
Siduu Ina Cow another thread igula cidhbiyay waxan oo dhan waxay ku biya shuban doonaan daanyeerta Xalane gumeysiga ku haysta oo raggan ka dhigi diiba wada oggol been ah..
Wallee Soomaali badankeeda ayaanan garan macnaha qarannimo iyo dowladnimo.
Unukaa leh baa yaabay
cagdheer way la taqaan sida loo qaxo mushxarada miyaadan ka ilbaxayn waar siyaad baroo ka xoog waynaa ayaa bakoorad laaga saaray xamar macadala inankan suuliga ugandese ku geeyo.
cali badaw ayaamahan maad nasoo qaadine maxaa dhacay,ma timir badan ayaa inasoo gaadhay
Nasiib darro Hassan Shiiq waxuu isku heeystaa siyaasi Qatar ah, markaas ayuu waxa xaqa ah, xaqiiqda ah ka baqayaa in uu sheego. Taasi fulay ayeey kaa dhigi Xasannow. Taasi waa waxa keenay adiga oo 4 sanno wadanka maamulayay in Farmaajo oo Buffalo laga soo gamay uu si sahlan kaa raayo doorashadii 2016. In aad fulay tahay oo aadan runta sheegin waxaa cadeeyn u ah Xassanow in aad la taagtaagantahay, oo waliba aad leedahiiin isbaheeysi musharaxiin Ayaan nahay daanyeer Shiiq Shariif iyo Ahmed Macalin Fiqi, iyo Abdirahmaan Abdishakuur oo dhahay “areey Farmaajo ii geeya” adiga io ayaga oo is weeydiin in la’iskala xisaabtamo move kii iyo dhaqaaqii qaldanaa ee siayasadeed ee horray loo sameeyay. Maryooleey runta oo eeysan isku sheegeeynin ayeey ilbaxnimo moodeen amaba siyaasad moodeen. Maahan ceeb in runta la’isku sheego.
Hal wax oo run ah oo uu waligiis Abdirahmaan Abdishakuur sheegay ayaa ah in dowladda Somaliya eey ku dhisantahay 4,5 iyo in xukunka qabiil lagu qeeybsaday. Sidaas owgeed, maaadaama uu daanyeer Farmaajo ku fashilmay iska dhaaf in uu isku wadda Somalidaan kala shakisanee, xataa reerkii uu ka dhashay ee Daarood ayuu keeni waayay marka laga reebo Dhulbahante guulwadayaal waligood wadda ahaa iyo ilkayar Mareexaan oo waligoodba kooda xun aanan dadka ka qaban hadhowna cabaada marka waranka la’is galiyo. Aaway Daaroodkii kale ee waaweeynaa sida Majeerteen iyo Ogaadeen? Sidda uu daanyeer Cabdirahmaan Abdishakuur sheegay, hadii doorashada eeysan intooda badan Daaroodka ka qeeyb galeeynin, oo uu daanyeer Farmaajo ku fashilmay in uu siyaasada dowladda dhexe ka gaddo reerkiisa, waa in uusan isa sharaxin, saa Doorashada waxaa lagu qaban deegaanda dowladda dhexe taageersan ee Hawiye iyo Raxanweeyn.
Ceeb miyaa in runta la’isku sheego dadow? Sow xal ma’imaan laheeyn hadiiba la dhihi lahaa dowladda dhexe waxaa wax loogu qeeybsan contribution, iyo qabiilkii wax kusoo darsadda dowladda dhexe? Sow taasi suurtagal kama dhigi karta in dadka Somaliyeed ku tartamaan taageerid dowladda dhexe hadii eey cadaalad iyo wax wanaagsan dadka ku hogaamineeyso?
Somalida waxeey u baahantahay shir “truth and reconciliation” oo runta dharka laga dhigo. Oo mid walba iyo reer walba oo qabqable dagaal, qabqable diin iyo argagixiye kasoo dhex baxay, oo wax kasta oo la’iska dhacay, la’iska boobay, la’iska dillay runta looga hadlaa. Sidaas ayeey daawo ku imaan kartaa.
Laakiin, shirar been ah. Kii xumaa ee reerkasta ku jirray oo la qarsanaya. Hawiye daanyeer oo argagixisda iyaga iyo umadadaha kale qarxinaya guryaha ku qarsanaya oo aanan loo sheegeeyn sow been la’isku sheegaya maahan?
Maalin dhaweyd waxaan arkayey dad qiraya in Cadaado yahay qof macquul ah runtana sheega, ana waxaan halkan horey oogu soo qoray in Cadaado yahay nin macquul ah, halkana ka guubaabiyo Guud ahaan Soomaalida, gaar ahaan reer tolkii Unukaa leh, laakiinse qaar kamida Reer Unukaa lehda halkan soo gala ma fahmayaan sheekada Cadaado, waxay u qaateen inuu ayaga wax ka sheegayo iyo reero qaas ah.
Sargaalka, waad mahadsantahay sida aad ii fahantay.
Tusaale kale, Isaaqa dowladda dhexe ee Somaliya waa ka buuxaan, waxna Kuma soo kordhiyaan. Xataa waxaa la hadalhayaa kuraasta beesha Isaaq Xamar halagu qeeybiyo. Haye, sow taas been la dhoodhoobayo maahan?
Dad Somaliyeed oo eey ku jirraan kuwa madaxda nalooga dhiga ayaa waxeey is tuseen/la tusay hadii been la’isku sheego in eeysan Somaliya ka go’een Isaaq, sidaas owgeed ayaa been markasta la’iskula socdaa. Kuwa Isaaqa ee Xamar jagooyinka looga dhiibana, reerkooda ayeey ku xirran yahiin oo hoos ka taageeraan. So, markaa, yaa meeshaas ku dhib qabba? Waxaa ku dhib qabba Somalida beenta loo sheegaya.
Walle iyo bille in eeysan Somaliya kala tageen waligeed. Beenta la doonayay in la’iskugu waddo ayaana dheereeysay in xal la hello. Ee hadii dowlad dhexe oo si cadaalad ah, runta la’isku sheego ku dhisanno waxa kaliya oo aan naqaan oo qabiil ah iyo wax aan isku darsano, iyada oo ajnabi waxba noo sheegeeynin xal waan helli laheyen. Gabi ahaana ciidanka dowladda dhexe uusan xukumin madaxweeyne walaa qof kale, oo siyaasadda abadan ciidanka laga mamnuucaa.
Fanankii hore ee BK oo yiri war somalay farmajo
Soo celiya oo doorta hada diidan KHAYRE doorta
somaliyey beesha daarood u tanasula hadad dalka
Ka naxaysan darood horaa loo shegay way kursi
Jecel yihiin ma jecla in la xukumo waxayse jecel
Yihiin inay wax xukuman marka wlalayal dalka u
Naxa oo kursiga noo daaya dorkan
Lols @ Jabhad,
Kursiga noo daaya!
Yaan la dagaalna oo Xamar nala joogo,
Hadhow ayey Kablalax rabaan iney dhahaan hal nin oo idinla joogey ayaad EXILE u dirteen.
Oo seen yeelna Gaajadaan soo Tahriibtey ee macangaga ah.
Reer Cad kama KACE iney cararaan maahane.
Cadaado waa ku salaamayaa saaxiib marka hore, marka xiga, sheekadaa aad soo qaaday ee qolyahaa IIDOOR horaan ooga hadlay oon halkan oogu soo qoray, kuligood way wada socdaan qolyahaa IIDOOR ama Xamar ha joogaan ama Hargeysa ha joogaane, waxaadna taas ku ogaaneysaa mid kastoo Koonfur xil ka qabta markay shaqada ka ka dhamaato waxuu ka dagayaa Hargeysa, xiitaa intay joogaan Xamar, waxay u ololeeyaan reerkooda, markaa waxaan is weeydiiyey hadii dhulkaas qabiilo kale deganyihiin ooysan raali ka aheyn sheekada IIDOORKA ee ictiraaf raadinta iyo go’ida suurta galna aheyn, markaa maxaa qolyahaa IIDOOR laga baryayaa? Halkana waan ku soo qoray mar hore.
deeqow macalin hatan nool ayaa wuxuu yiri waxan
La kulmay aun abdirishid c sharmarke wuxuu yiri
Wuxuu igu yiri umada kale inay wax xukuman iyo in
La xukumo way ogol yihiin lakiin qolada daarood
Waxay raban in iyaga keliya ay wax xukuman
Marka ayuu shegay dalkan in inqilab milateri ka dhici
Doono dalkana Qas iyo Qalalaso geli doono war
Madaxwayne farmajow tanasul samee oo meesha
Hanagu cebayn hadad kursiga rabto waxad tirahda
Wlalayalow kursiga ii daaya 4 ta sano ee so socota
Waar nin yahow mararka qaar funny baad tahay.
Kulahaa kursiga Darood u daaya.
Adeer kaftankaad u tidhi waxay isoo xusuusisay daanyeerkii Sanbalooshe ee lahaa Hawiye Qudha ha taliyo laba daraadle Galaal oo isna fake stat inta la soo baxay Soomaalida u kala saafi waayay.
Walle badownimada Soomaalida qaar doorasha xalaal ah -waaba haddii la helo- kuma kala baxdo wakhti dheer bay u baahanaan doontaa cillad bixinteeda.
Xasan sheikh si macquula ayuu u hadlay waana soo dhawaynayaa fikradiisa
Farmaajo muxuu katanaasulaa ma musharaxnimada ayuu katanaasula ilaa midawga musharaxiinta inaad oo jeer ayaa layidhi dadka Aad diidantihiin ee ku jira gudiga noo sheega aan kasaaree wayna diideen inay yiraahdaan hebel iyo hebel kasaara waxaad kaloo ognahay 6 qodob inay dawladu ka tanaasushay. Waxaad kaloo ognahay in puntland iyo jubaland madaxdooda diideen inay gudiga doorashada soo Diraan waxaad kaloo ognahay inlagu qaxweeyo waqtigu intuu kadhacayo aan meermeerino oo xaragaha sii adkayno bal hal tanaasul puntland iyo jubaland iyo mucaaridku sameeyeen ii sheeg
7aad ka bacdi markii Farmaajo la doortay bay mucaarad isku sheegga iyo Jeegaantu bilaabeen, kursiga noo bannee iyo xaqba uma aad lahayne yaa kugu fariisiyay?…
Waar bal yaabka adduunka, soo tii aan doorashada kula galay een kaaga qaaday?… Iyo mayee hadda bal iiga kac, wuxuu yiri waayahee ii kaadiya inta aan xilligayga ka dhammaysanayo, deedna doorasho u diyaar garooba, qaylaa af labadii la wada yeerayay tan iyo maantaas…
-Meeshan dad doorasho rabaa ma jiraane hawlo la yaab leh baa ka socda…
-Ujeeddada ugu wayni waxay ahayd in Farmaajo diktatoor laga dhigo ama dhiig faraha loo gasho, dabadeedna waxaa hawshaa ku bullaali lahaa, Aaran-jaan iyo Jeegaan, waxaana ku saqiiri lahaa dawladda xamar ee la yabyabayo…
-Sida muuqata Muuse Handaraab waxaa ka qaylisiinaya intii uu mishin wax uga maleegay Farmaajo ayaa socon waayay, hadda waa last plan iyo inuu jabhado ku kiciyo koofur, oo ina Godane kale soo diro, illayn hadday koofuri hagaagto wuu ogyahay tallaabada xigtee….
Tani waxay isooxasuusisay Jabuutiyaankii yiri ” Faranjigii baa yimid ma ahaa , iminkuu kalaxaraashayaa ” Yacni hawlihii horey loogu guuldareystay ayuu ka shaqeysiinayaa ! Tanina Xalane ayey ka warsugeysaa . Waqtiyar kadib soo dhawr iyadoo uu gaal yar u miisaamayo hilbihii ay iyagu miisaamanwaayeen .
—Gunnimada la sheegaa waa tanoo kale—
kalsame iyo wax ma garatada kale
Waar ilamaa 1969 walaahay ilaah baa idiin sakhiray hawiye oo ka dhicay dad u jilicsan yaa soomaliyaay markaad ku muusanawdaan idinkoo shilin ku darsan oo ay idin cafiyeen ayaad ilaa maanta u dawladaynaysaan,
daarood waxba yaan layku qaadine labada aan wax maamuli aqoon waa mareexaan iyo majeerteen bal meel ay maamuleen oo aan dumin lama hayo hawiyena labadanaa chip ka gashaday
bal hawiyoow daaroodka kale ku tijaabiya inay idin maamulaan believe me sidan waad dhaami lahaydeen
Sargaalka waan kusalaamay sidoo kale saaxiib iyo dhamaan asxaabta kale.
Ninyahow waan isla fahanay Isaaqa, anniga ma fahmo magaca iidoorka ahee, waa runtaa oo ilaa iyo waagii Cumar Carte, iyo Buubaa, ilaa iyo Godane ilaa iyo kuwa hadeer dowladda dhexe ka buuxa waa isla wada socdaan, oo waa is ogyahii. Laakiin, madax ku sheegta Somalida, iyo waliba qabiilada kale ee Koonfurta Somaliya ayaa lagu qaldayaa in Isaaqa dowladda dhexe laga soo buuxiya, iyadda oo la’ogyahay in eey dowlad been ah iksu sheegeen. Markaa kuwa mdaxda iskugu sheega dowladda dhexe meesha kaliya ee fakirayaan oo cabir/caqli daanyeerimo ah ayaa waxeey tahay yeeysan sii ordin, oo sii go’in Isaaqa ee jagooyin ku magacaaba. In fact, bil cagsi hadii lasameeyn lahaa, hadii waxba looga soo darri laheeyn dowladda, waxaa dhici laheeyd in eey Isaaqa hurdada ka kacaan.
Waxaae iigu yaab badan kuwa Hawiyaha sheegta ee Isaaqa karaka marsanayaan ee ku leh ha go’aan. Yes, ha is maamulaan, oo waliba dadka la dagan si cadaalad ah hakuwada noolaadan, laakiin, dowlad Ayaan nahay waa caqli daanyeernimo. Annaga oo reer fulaan ahna hadde dowlad Ayaan nahay, waxaana safaarad ka furanay North Korea, iyo Kim Jung Un lols.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklkkkk gaja quusatay
Somalida cadaaladda waa ka xishootaa.
War warkii igu danbeeyay ee la yiri sheega guddiga doorashada ee aad dhibsateen illaa maantadanna la la yahay maxaa uga aamusan tihiin.
DAANYEER QABYAALAD DILOOTAY AYAA TIHIIN.
1-Waxaa ay yiraahdeen doorasho cod iyo qof lama qaban karo WAAYAHAY.
2-Dooarsho dadban oo ergada la badinayo si aan loo laaluushin 301 qof waa diideen waa loo yeelay.
3-Shir ayaa Dhuusomareeb loo fadhiyay wixii ka soo baxay wey saxiixeen,hadana waa diideen.Xmar aan isugu imaano iyo shir kale waa laga yeelay.
4-Guddiga doodarshada meesha halaga saaro waa laga yeelay.
5-Guddiga aad dhibsateen soo gudbiya,maya masoo gudbinayno(Daahir Geel)
TUUGO IN AY YIHIIN SOW MA CADDA.
Lacagta Emarate iyo Kenya dalka in lagu gubo ayaa taageersan tihiin.
WAXAA DHIMAN GUDDIGA ANKAA SOO MAGACAABAYNA IYO FARMAAJO DOORASHADA WAAD NOOGA ADKAANAYSAA EE KA HAR XAMAR AYAAN DEGENAHAY HADDII KALE CARUURA IYO HAWEENKA AYAAN XAIQINAYNAA.KKKKK
Daanyeer aan xishoon ayaad u qaylinaysaan.
Aar muu yiraahdaa waxaaan ahay galmudug ileen hawiye sodohe calashan xagas caabudwaaq hadana uu marsiiyo
Macangag Albaabka kuu fadhiistay, oo gacantaaduna qaban
maxaa ku sameyn laheyd?.
Barnaamijka ila TALI
Ayaan codsiyo u dirsanay
Wlh C/llaahi Yuusuf ayaa xataa ka macquulsanaa Macangag Farmaajo.
– Waa nagu qataleen
qandho helahaan kakanahaa
Gacantaada oo xumata seydhin kagama hadho seedigin oo xumaadey sidee laga yeelaa meesha nabsigii kablalax aa soodahirey kkkkkkkkkk reer bariise yaabay
Farmaajo waa Kigaamaha Soomaaliya, waa ninkii isku keeni lahaa deetana ka dhigi lahaa dalka Afrika ugu qanisan uguna horumarsan…
Sidaa awgeed baa waxaa qatar ku soo fool leh u arka dhammaan intii dana qaas ah ka lahayd ama nolosha u diiddanayd dalwaynaha Soomaaliyeed, ama gudaha ha joogeen ama dibeddee…
Kooxaha guduhu waa shaqaale, iyagu ikhyaar ma leh, hadba qolada jeegga siisa ayaa ku shubata, qolyaha dibedduna waa kala dan…
– isku soo duub oo waxaa toosay shacabkii Soomaaliyeed gartayna halka laga jiro, maanta cid u jooinaysa ma jirto dhammaan maafiyada is-bahaystay…
Ninyow Hawiye maxaad u haysaa haddaad Daarood isku shiddo oo ay kaba soo qaad iska soo saaraan?… Soo adigii lahaa gudhuuda shaqo iskuma lihin oo dawlad gooniyaannu nahay?… Teeda kale Hawiye ma xoolo adiga kuu shaqeeyaa mise waa dad bnu aadam ah oo yaqaan cidda ay dantu ka dhaxayso?… Hawiyahaba malaha waxaad u haysataa dhawrka ha biqlayso ee dhiigshiil wax u balqiyo oo afkiinna ku hadla… Miskiin
qofku markuu taariikhda aanuu waxba karan kama duwana daayeer tusaalena waa ku siin
just go back in history not far long,
siyaasiyiinta ku beeray cancerkii bilaa dawada ah ilaa hada
are you fucking kidding me walaahay waxay ahayd in untouchable laydinka dhigo saa ilaa hadaad lasoo taagan tihiin xayawaankan aarmaajo ayaa dad wataan
waar anigu somaliland hadyad layguma siin cid walba oo ku cadaw ahna dagaal ayaa naga dhexeeya sheeko baralaydan yaa soomaliyaay ee aad ku tuugsataan cida ilaahay idiin sakhiray waa nimaanka hawiye laakiin maanta doqonimadiina hadana waad ula timaadeen.
nin nacas ah uu baa laga iibiyaa yaa somaliyaay waar ninka maanta qaxayaa waa adi every 30 years waxay idiin noqotay anniversary
But the mouth of a wise man is in his heart,
soon you will be classed as untouchable
Waar niyoow ilaahay wax buu idin tuasay
bal ducayta marba ilaahay mid laydunku salido ayaa idiin yimaadee
ilamaa aadan cade till xasan sheekh si sharaf leh ayey uga wada degeen bal yaa xayaanka guulwadayaasha ah yidhaahda taariikhda soo yara akhriya before they open their dirty mouth waa dad lagu dhalay xoolo xaaraana
DADKA SOOMAALIYEED WAA OG YIHIIN CILADDA DALKA SIYAASADDIISA RAGAADISAY.. WAA MAAMUL GOBOLEED REER HEBEL AH OO AAN LAHAYN XUDUUD CAYIMAN OO RABA INAY DANTA SOOMAALIYEED DANTOODA KA HORE MARIYAAN.. WAA MOORYAAN SIYAASADEED OO AAN DALKA DANI UGU JIRIN WAA JEEBKAYAGA IYO MAXAAN HELI KARAA KENYABA HA BIXISEE.. IMAARAAD IMISAAN KA HELI KARAA WAXAY RABAAN INAAN WELIGEEN GUN AHAANO.. CIIDAMADAASI WAA REER HEBEL KUWAASINA WAA REER HEBEL AYEY DOONAYAAN MA RABAAN INAY UGA DANBEEYAAN MASIIRKA UMADDA IYO SIYAASADDA DALKA DOWLADDA FEDERALKA AH WAXAY ISU ARKAAN INAY YIHIIN XUBNIHII DOWLADDA FEDERALKA MARKAY DOONAANA SHIRI KARAAN OO GO, AANO LAGU CURYAAMINAYO DOWLADDA FEDERALKA SOO LAQINTAAN.. MARKA DADKAYGOW HADDII AY MAANTA GUULAYSTAAN SOOMAALIYA IYO SOOMAALI WAA KU DAAYEEN FARMAAJO AMA HA JOOGTO AMA HA TAGO BALSE WAA INUU KUWA SIDAAS U FEKERYA KA HOR TAGO WAAYO WAA CAQABAD MADAXWEYNE KASTA HOR TAALLA
XASAN TAAS WAA U WAAYO ARAG KUWA KALE EE SHARAXANNA WAA OGYIHIIN.. DADKA LEH DAGAAL QABIIL AYAA SOOMAALIYA DIB U GELAYSAA WAA KUWAAS AAN RABIN INAY FEDERAALKU HANA QAADO
WAA MOORYAAN SIYAASADEED OO CUSUB. TAN KALE HORTA HADDII XUBNO CUSUB YIMAADAAN SOW REER HEBEL UUN MA AHA MAABA LOO DAAYO KUWA JOOGA MAXAA QABIIL KA IYO ODAYAASHA LOO WAREERINAYAA OO MARKAA AY MADAXWEYNE CUSUB DOORTAAN AMA KII HORE
Adiga oo iga raali ah, anniga marmar Kuma fahma. Waxaa dhici karta device ka aad wax ku qoreeysid iyo computer ka in uu hadaladaada si qaldan u badallo. Hadi iaad ka waddid “Muu Farmaajo dhaho reer Galmudug Ayaan ahay, iyo sodoh dhinaceeda kasoo marra uu ku marsaddo” Haddi ninkaan waxuu yahay walaa reer Galmudug, walaal reer Xamar lama yaqaan. Dhaqankii qabaai’ilka Somalida lagu yaqiin malahan. Waxyaabo ceeb ah waa laga sheegayay, Ilaaheey ayaase og waxa ka run ah. Waxaase muuqata in uusan laheeyn dhaqankii Somalida, iyo galgalka reeraha oo lagama maarmaan u ah waqtigaan lajooga siyaasada Somaliya. Reerahii dadka uGu dhawaa ayuuba buuqa uGu badan ku wadaa, marka ma’idinla tahay ninkaan in uu reer kale dan u waddo? Uma maleeynayo.
Anyways, ninkaan Farmaajo kooxo kala duwan ayaa soo saaray oo uGu talagalay in eey Somaliya dib u celiyaan dowlad dhisidda Somalida. Waxaana kooxahaas kamid ah qabiilo kala ujeedooyin leh, iyo kuwa aananba ujeedo laheeyn. Laakiin, hadeer Farmaajo daanyeer waxuu leeyahay ujeedo isagga. Waase hadii jiilkeena maantay aan ka yeelno sidda jiilalkii horre uga yeeleen Afweeyne in uu wadanka Somaliya ka dhigo musqusha aduunka. Waxyaabaha loo soo saaray waxaa kow ka’aah in la joojiya burburinta lagu wadday kooxdii argagixissadda alshbaab. Waxaa kaloo loo soo saaray waxyaabo kale oo qofkii maskax leh fahmi karro.
Sorry, Gaafow ayuu ku socdaa qeeybta horre ee qoraalkeeygaan korre.
Horaan kuu sheegay inaad tahay raksiile BBCda dhegytsa oo siyaasi isu qaatay. Sow ma ogid in qof kasta oo baarlamaanka dhexe ku jiraa degaankiisa iyo dadkiisa u shaqeeyo. Kan Ciise, danaha Ciise iyo Jabouti ka shaqeeyaa, ka Ogaadeen danaha ogaadeen iyo Ogaadeniyuu ka shaqeeyaa, ka majeerteen danaha Puntland buu ka shaqeeuyaa. Ma intaa yarbaad fahi weyday. Maxaa diidaya ka Isaaqu danaha Isaaqa ka shaqeeyo. Midbaanse ku weydiinayaa, Saleebaan baad tahay, sannad walba waxaad ajuuro xoolo iyo lacagba leh siisaa beel gabooyaha ka mid ah, magacoodii baa iga hoos baxaye waa beeshii uu ka soo jeedy Sheekh Maxamed Guuleedkii agaasamaha ka haa wasaaradii diinta xilligii Siyaad Barre, adigoo ku doodaya inaad ka karaamaysanayso, caqligaagu ma garan weyday karaamada midgaanku adigu ka siinayo muu isagu dulmiga Somalidu ka haysa kaga baxo.
Waxba ha xanaaqin oo reerka ha ka goyn ajuurada.
Waxba kiis ha iska waalin, nuxurka hadalkaagu waa Hawiyoow Daarood ma dili karnee noo dila oo aydnaan toos u lahayn lkn hab baryo iyo isku dir ah oo jilicsan…
Aan ku su`aale maskaxdaadu ma inta yar ee lagu qufulay bay qaaddaa?… Meeshan baad isku dir Hawiye iyo Daarood la soo fadhidaa sida yatiintii markaasaad haddana faan iyo faataabakh ku daraysaa…
Waar isku qosol adigu, naf kale ninka inta waayay markuu nacaybkii ku qaashay wax uun isku dir la soo taagan iyo gobannimo xaggee bay iska soo galaan… Ruufyaan.com,